Spring anyanwụ, målkalas na ihe mgbu na Holm mkpọda | Holmbygden.se
Ihe na 26 April, 2014 site Holmbygden.se
“Holm benknäckargäng si ọhịa” ya mgbe ụfọdụ e kwuru, ma egwuregwu o nọ ugbu a a anuri ọnụ park na rụpụtara a gbajiri ụkwụ nke onye nke egwuregwu si eleta Indals Ọ BỤRỤ.
Holm ìgwè mmadụ esonyerela massively n'oge a afọ premiere n'ụlọ na mmeghari tupu mmalite nke usoro mmepụta. Ọ bụ a nọworo na-nzukọ n'etiti agbata obi na parish Holm o Indal, nke weere ọnọdụ na Medelpads mbụ na ma eleghị anya kasị ọma nọ na-ahihia arena – Holm Vallen.
Mgbe ọtụtụ afọ nke dormancy Indal ugboro ọzọ jisiri ịchịkọta ndị football ụdị. A nọworo na-comeback ke nsonso usoro. Ọtụtụ nke Indal otu mbụ e-akpọ na Holm sweaters na taa bụ a mma ịdịghachi. Holm-okoro Switched Otú ọ dị, adịgide ezi ọsọ ọsọ, na ọgwụgwụ ya pụta bụ dum 8-0.
Wezụga oké football rụzuru bụ mangranna turnout n'etiti Holm bi ila taa kpam kpam pụta ìhè. More na ndị ọzọ “på byn” aghọta ụtọ na ijikọta football ejije na izute ndị mmadụ na zụrụ ihe ha a ọma steaming iko kọfị ma ọ bụ burgers.
An nzukọ feature nke egwuregwu, Otú ọ dị, a ike ọnụ park n'etiti Henrik Lindblom na Holm sweta na Magnus Persson si Indal Ọ BỤRỤ. N'ụzọ dị mwute, ihe oyi na a abụọ mgbaji ọkpụkpụ nke Magnus na ụgbọ ihe mberede nwere na-akpọ. Na olileanya nke a ngwa ngwa na-agwọ ọrịa na-ekele ntakịrị àgwàetiti ọma egwuregwu na uche Indalingarna chi na afọ a football.
Holm ụmụ nwoke na-eme ememe mmeri na honed cohesion maka usoro na grilling na joviality of “ịda” mgbe egwuregwu.
Gụọ ihe ndị na egwuregwu akụkọ nke na obodo na holmssk.se/alaget.